Su’aal: Waxa la igu sameeyey gudniinka xubnaha taranka, sidee ayaa la ii caawin karaa? - Youmo
Jag är könsstympad, hur kan jag få hjälp? - somaliska
Waxa la igu sameeyey gudniinka xubnaha taranka, sidee ayaa la ii caawin karaa? Waxaan maqlay in qaliin la isku sameyn karro. Miyey waalidkeygu u baahan yihiin inay ogaadaan haddii qaliin la igu sameeyo? Gabadh 17 sanno jir ah.
Waxaad heli kartaa caawimo fiican. Taas waxaad ka heli kartaa ungdomsmottagning, qeybta cudurada dumarka ama rugta caafimaadka, vårdcentral. Waxaad la xidhiidhi kartaa skolsköterskan haddii aad dugsiga dhigato.
Waxa jirta rug u khaas ah qofka loo sameeyey gudniinka xubnaha taranka ee dumarka: AMEL-mottagningen oo ku taala magaalada Stockholm Vulvamottagningen oo ku taala Angered. Waxaad halkaas aadi kartaa meesha aad doontaba aad ka deganaatid wadankee. Waxaad caawimo ka helaysaa jidh ahaan iyo sidaad maskax ahaan dareemayso.
Waad saxsan tahay in laguu sameyn doono qaliin haddii aad doonayso iyo haddii loo baahdo. Qaliinku waxa uu ka saari karaa boog ku xanuunaysa, ama waxa la furi karaa hoostaada si ay kuuga dhib yaraato inaad kaadido oo caadaddu kaa timaado. Qaliinku waxa uu si wanaagsan kaaga caawin karaa haddii ay kugu adagtey inaad galmooto ama hadda aad ku raaxaysato galmada. Waxaad heli doontaa warbixin dheeraad ah marka lagu caawinaayo.
Uma baahnid inaad kala hadashid waalidkaaga, haddii aanad rabin. Waxa lagu caawin karaa oo qaliinka laguu sameyn karaa xataa haddii aanay u baahneyn inay ogaadaan.
Waxaad markasta ka heli doontaa caawimo turjumaanka haddii aad u baahato.
MawduucSawiro taxan: Gudniinka xubinta taranka ee dumarka – xalaaleynta xubinta taranka